8 inch inopararira pombi yekugezera
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW 8 In. Yakapararira 2-Handle Bathroom Faucet Mu Chrome
WOWOW 8 In. Kupararira 2-Handle Bathroom Faucet Mu Chrome
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 22 kasitoma ratings
(22 kasitoma wongororo)
Sarudza yekugezera kunyura faizets akapararira 2320300C yakakodzera iwe pachako kushandisa, uye shandisa zvakanyanya kugadzikana; uyo waunosarudza anogara akanakisa. Isu tichaita, semazuva ese, chengetedza yakanaka uye yakanaka yekudzosa vatengi, uye ini tinotarisira kugovera zvimwe newe! Kubva pane kusarudzwa kwezvinhu kusvika pamhando yekukonzera, tashanda nesimba kukupa wakanakira mhando.
2320300C yekuraira mirairo
Bathroom faucet chrome 2 inobata 2320300C
Fafitera yokugezera yakapararira inopa kubata kwekunze kune chero yekugezera. Imwe mukana wakakura wewakapararira wekugezesa faucet 2 inobata ndeyekuti iwe unokwanisa kusanganisa kuyerera kwemvura maererano nezvido zvako chaizvo. Ye 2- inobata bafa faucet inokutendera iwe kudzora iwo unopisa uye unotonhora mvura pachako, kusanganisira inoyerera chiyero. Nekuda kweizvozvo, iwe haumbozokanganisa zvakare uye kutambisa mvura inopisa nepo iwe uchinyatso haudi. Kana kuti zvakanyanyisa, kupisa maoko ako nemvura inopisa. Naizvozvo imba yedu yekugezera faucet chrome 2 inobata is a elegant and safe safe for your bath.
Iyo yakakwira arc yekugezera faucet neiyo yakasarudzika 7-dhizaini, inopa chaiyo kubata kune chero yekugezera. Vagadziri veWOWOW vanozivikanwa zvakanyanya kuti vagare vachitsvaga yakashinga dhizaini kuita mutsauko neyekugezera faucets yayo. Nekuda kweizvozvo, imba yekugezera faizets yeWOWOW nguva dzose akasiyana zvishoma kubva kune imwe yekugezera faucets iwe uchawana. Izvo zvinokubatsira kuti upe imba yako yekugezera inokosha uye yakasarudzika yemaficha. Iyi yakasarudzika maitiro iwe uchawanawo mune yekugezera faucet chrome 2 inobata yeWOWOW. Iyi yokugezera faucet ichapa zvechokwadi inosimudzira yekugeza kune yako yekugezera.
Kuisa yekugezera faucet chrome 2 inobata
Kuisa yekugezera faucet chrome 2 inobata iwe uchada 3-gomba yokugezera kunyura. Kazhinji, maburi akafanogadzirirwa mabato maviri aya akaiswa pamasendimita mana kubva pane faucet pachayo. Asi iwe unogona kusarudza chinhambwe iwe pachako kana usina pekugezesa yekugezera kunyura. Anobata anogona kuisirwa pa4 tot 4 inched kubva kune faucet pachayo. Saka zviri kwauri kuti usarudze daro chairo. Kuti uise zvigadzirwa iwe unongoda maviri maburi ekuwedzera e16 kusvika 1 inch. Iyo dhiza dhiza dhiza inogona kusvika 1,5 inch.
WOWOW yekugezera faucet chrome 2 inobata yakagadzirwa neakasarudzika yekubatanidza kuvakwa. Iyo inopisa uye inotonhora mvura inogona kuisirwa nekukurumidza-kuisa yekubatanidza pasina kushandisa wrench. Nekuda kweiyi tekinoroji yekugadzira, iwe unodzivirira mapipi emvura ekuputika. Iyi faucet yokugezera inouya neyese yakazara paki, inosanganisira seti inokurumidza mapaipi ekubatanidza uye yakawedzerwa mvura yekupa mitsara. Neiyi yekuisa kit iwe uchakwanisa kuisa ino yekugezera faucet chrome 2 inobata iwe pachako pasina kuhaya pombi. Iwe unochengetedza zvakanyanya pakuisa mutengo zvichitevera nyore kuisa vhidhiyo yeWOWOW. Kuisa kunogona kuitwa mumaminitsi makumi matatu pasina chero dambudziko. Hazvisi nyore here?
Dhizaini yokugezera faucet chrome 2 inobata
Iyo yekugezera faucet chrome 2 inobata ine yakagadzirirwa kurongedzwa neyakagadzika pasi iyo inotarisa inoshamisa mune chero chero imba yekugezera. Iyo simbi-mbiri inobata levers inokupa iwe kudzora kuri nyore. Iwo levers inotarisa inoshamisa nemitsara yayo yakatwasuka uye ergonomics dhizaini. The levers dzakakodzera saizi izvo zvinoita kuti zvive nyore kudzora uye vakasununguka kutendeuka. Iwe unogona kusevha iyo levers nekungoedza zvishomana uye kungo taurisa mvura inoyerera nenzira isina nhanho. Kunze kwezvo, imba yekugezera pachayo inogona kushandurwa yakazara mazana matanhatu emadhigiri, kuitira kuti ikupe nyaradzo yakakwana uchishandisa bafaet yekugezesa, kana uchinge uchichenesa imba yako yekugezera kunyura.
Iyo sirivha yekugezera faucet ne 2 inobata inopa girazi-senge chrome kupedzisa. Izvi zvinonzi zvisina zvazvinobatsira maitiro zvinonyatsoshamisa uye saka zvakanyanya kukodzera chero yemazuva ano yekugezesa décor. Iyi chrome yekugezera faucet yaipepetwa zvishoma kuti ipe kubata kwakanaka kune ino yekugezera faucet chrome 2 inobata. Iyo inowanzo kupenya chikamu chechrome yakangoderedzwa zvishoma kuitira kuti ipe kutaridzika kwakakosha. Sezvauri kuona, WOWOW inotsvaga nzira dzakasiyana dzekugadzira imba yako yekugezera yakakosha uye yakasarudzika.
Pamusoro-we-pamusika wemhando yekugezesa faucet chrome 2 inobata
Zvishandiso zvemubhedha wekugezera chrome 2 inobata yeWOWOW zvirokwazvo ari pamusoro-e-pamusika. Zvinhu zvakasimbi zvesimbi chete zvinoshandiswa simbi isina simbi, ndarira uye zinc alloy. Izvi zvinochengetedza mhando yepamusoro uye hurefu hwehupenyu kutsungirira. Izvi zvakasimbi simbi zvinhu zviri pamusoro pezvakawanda zveindasitiri zviyero. WOWOW inotoshandisa zvirinani zvemhando yepamusoro pane mamwe maA-brand anozivikanwa mumusika. Nezvinhu izvi zvakagadzirwa nesimbi, WOWOW inovimbisa pombi yekugezera chrome 2 inobata haizotyorwa. Kunyanya iyo yekubatanidza yendarira, iyo yendarira musimboti uye nendarira nzungu vanoumba humwe hunobatana kubatana hwakasimba uye ngura mahara. Kunze kwezvo, izvi zvinhu zvinovimbisa ku
chengetedza mvura yemhando uye nekudaro hutano hwako nemhuri yako.
WOWOW yekugezera pombi chrome 2 inobata inouya neyekurumbidza pop up drain chimiso zvakare. Neiyi nzira iwe unogona kugadzira yako yekugezera singi sehumwe humwe kubatana. Iyo pop up drain yekumisa inogona kushandiswa nyore nyore nekubata zvishoma kwemunwe wako. Nenzira iyi unogona kurega mvura yese ichiyerera kure nyore. Uye pasina chero ruzha runovhiringidza nekuda kweyakagadzirwa dhizaini.
Njodzi-isina yekugezera faucet chrome 2 inobata
Iyo yepamusoro-grade Neoperl aerator inokupa inoyerera uye yakapfava kuyerera kwemvura. Nekuda kweayo matsva ekuyerera kwemvura kuyerera, iwe unenge usununguka kubva kumvura ichisimuka paunoshandisa yako yekugezera pombi. Sezvo zvaive zvakagadzirwa zvakagadzirwa, zvinokuponesawo iwe zvinodarika makumi mashanu muzana emvura yekushandisa. Naizvozvo iwe unozogona kudzikisa yako yemvura mutengo pamwe neWOWOW yekugezera pombi chrome 50 inobata. Neoperl aerator inowoneka uye inogona kungocheneswa kana kutsiviwa newe.
Sezvo WOWOW inokupa iwe yakanakisa kukosha kwemari neayo yekugezera pombi chrome 2 inobata, isu tine chivimbo chekukupa iwe wemakore matatu-makore warandi. Isu takaona vatengi vazhinji vachidzoka vachitenga mapombi edu ekugezera zvakare, uye iyi chaiyo pombi yekugezera yakashandiswa munzvimbo zhinji dzeveruzhinji zvakare. Naizvozvo chinangwa chedu chemhando yepamusoro chinosimbiswa nevatengi vedu vepasirese. Iwe unofukidzirwa nevimbiso yemazuva makumi mapfumbamwe ekudzoserwa mari paunotenga pombi yedu yekugezera. Kana iwe usinga gutsikane neyageji pombi chrome 3 inobata, iwe unozowana iyo yakazara kudzoserwa pasina mibvunzo yakabvunzwa. Saka iwe unogona kutenga yedu yekugezera pombi chrome 90 inobata 2% isina njodzi!
Zvakanakira imba yekugezera faucet chrome 2 inobata muchidimbu:
 Yakasikwa yakashongedzwa imba yekugezera faucet
 Yakasarudzika chrome yakasvibiswa kubata
 Chiri nyore kushanda
 Yakagadzirwa nemidziyo mikuru yendarira
SKU: 2320300C Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: American mureza, kubata kwakazara, lever inobata
22 anodzokorora nokuti WOWOW 8 In. Kupararira 2-Handle Bathroom Faucet Mu Chrome
Ini ndaisatarisira faucet yakachipa kwazvo zvichienderana nehunhu hwayo. Izvo zvakada kufanana neiyo yandaitsvaga muchitoro asi kwete seinodhura. Yakanyanya nyore kuisa, yakachena kwazvo uye yakashongedzwa dhizaini. Ini ndinoda chaizvo kuti zvinofamba sei nechero dhizaini yekugezera uye singi. Yakanyanya mhando. Yakasimba uye inochinja uye inotaridzika yakasimba. Iwo mavara haanyatso kubatira kumusoro kwepombi asi asi kunyangwe zvikaita zviri nyore kuchena. Chekupedzisira asi ikozvino chidiki, iyo tepi musoro inotenderera 360 degree, iri nyore chaizvo pandakanga ndichigeza kumeso kana kukwesha. Yakagadzirwa senge nyore.
Pombi iyi yakanaka chaizvo, inotaridzika kunge yakanaka kwazvo. Kuisa kwacho kwakanyatso chenjera, chikamu chimwe nechimwe chine bhegi rayo rakazvimiririra risingarukwe. Mvura inoyerera yakakura, uye mubato unonzwisisa, ndinogutsikana nekutenga uku pombi haina kudhura, asi mubati ruoko anodhura. Ndakahaya murume anobatsira uye zvakamutorera maawa maviri nehafu kuti aise pombi yangu nyowani. Nekuti pombi dzekare ine ngura, zvinonetsa kuibvisa, asi inokosha.
pombi ine uremu. super nyore kuisa uye iwe unogona kutaura kuti yakanaka mhando imwe. ndinovimba inogara kwenguva refu
Mirira kuti tenzi aise! Hunhu hwezvinhu. Rakaumbwa uye ruvara rwakakodzera kwazvo kune yangu yekugezera!
Yakanaka ine mutengo wepamusoro tepi ini ndinofarira iyo kodhi yekodhi inobata zvese zvinoita kunge zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro iyo pop-up drain iri zvishoma yakachipa kutarisa asi hapana munhu anozviona kana yaiswa yaitaridzika zvakanaka. Ida dhizaini kuda iyo hombe bhegi musoro uine imwe nzvimbo yekuisa maoko ako pasi ipapo uye kugona kushambidza kumeso kwako ECT. Inouya nezvose zvaunoda kusara kwemidziyo yekuisa mukati. Ida iyo 360 degree kutendeuka. Ini ndakanhonga imwe nekuda kwedesign yacho inongotaridzika kunge yakatsvinda saka ndiwo maitiro angu. Inofara inotaridzika seyakanaka mumunhu sezvazvinoita mumufananidzo uye inotengeka chikamu chakanakisa.
uku kwaive kutsiva pombi yandaisa pamusoro pemakore makumi mana apfuura iyo yakanga ichitanga kubuda. Kufambira mberi kwekufamba kwenguva kunoshamisa. O-zvindori pachinzvimbo chekushandisa plumbers putty tisingataure nezve iyo mounting. Izvi zvaive zviri nyore kupfuura mapombi aimbova. Inotaridzika uye inoshanda kwazvo. zvikuru kurumbidza.
Isu takanyatsotenga chigadziri ichi chestand yedu nyowani bhavhu nekuti taida chigaro chakareba. Takatofanira kutenga rakasiyana danho rekudonha plug izvo isu zvataiziva taizoita nekuti izvi zvinoitwa zvakanyanya kune yekugezera singi. Chigadzirwa asi chinotaridzika zvakanaka pabhavhu. Anofara kwazvo nazvo!
Pombi inotaridzika zvakanaka. Isu takangoisa uye hatina kana dambudziko nazvo kusvika zvino. Inobata imwe yedu yekugezera Hardware. Pombi Inopararira kupa imba yekugezera yakanakisa, nyeredzi shanu.
Zvakakosha peni imwe chete !!! Sink yangu inotaridzika uye zviri nyore chaizvo kuisa. Ini ndinokurudzira zvikuru. Inotaridzika kunge pombi chaiyo inoshamisira.
Kana uchitenga yakasarudzika yakasarudzika mhando, inofarira iyo kubata haizosiyi chigunwe chemunwe. Pandakatambira zvinhu izvi, ndakaona kuti ndakaita sarudzo chaiyo. Zvaiita kunge zvepamusoro-soro uye zvinorema kubata muruoko rwangu.
Yakanaka pombi. Mhando yepamusoro. Yakasimba. Kupedza kwakanaka. Yakapakurwa zvakanaka. Ini ndaishandisa ini yekushandisa diki singi. Ida iyo inotenderera.
Iyi ndeimwe yefaucet huru yemabhawa, mazuva mashoma apfuura pombi yangu yekugezera yakanga yatsemuka zvachose, saka ingoisa iyo faucet nyowani mazuva mashoma apfuura, uye inoshanda zvikuru inoitawo kuti imba yangu yekugezera iratidzike yakazara ruvara, ndakaifarira, uye mhuri yangu yese inoifarira!
Saka ini handina kukwanisa kushandisa pombi haina kuenderana neyangu yazvino Hardware. Ndakafunga kuti yaiyevedza uye yakanaka mhando. Plumber akati haazove neDambudziko kuisa saka ini ndinofungidzira kuiswa kuri nyore. kunyadziswa haina kuenderana zvaitove zvakanaka kutaridzika!
Handigoni kutenda kuti ndakazvimisikidza zvese ndega uye zvinongotora maminetsi makumi matatu. Ino inguva yangu yekutanga kuisa pombi zvinoreva kuti zviri nyore kuisa. Inotaridzika kunge yakanaka uye yakashongedzwa muchimbuzi changu.
Pombi iyi iri nyore chaizvo kuisa. Ini nemurume wangu hatina ruzivo rwekuisa pombi, asi takazviita pachedu nekutevera rairo. Inotaridzika zvakanaka pamusoro petafura yangu yemarble. Hunhu hwakanaka kwazvo !!! Zvirinani pane zvandakawana kare.
Ndanga ndichitsvaga yakasarudzika kutarisa kweangu huru yekugezera kuratidza. Hukuru hunhu uye kusimba kwemutengo. Unogona zvirokwazvo kukurudzira kana iwe uri pabhajeti uye uchitsvaga yakanaka show chidimbu.
Bhegi iri rinotaridzika kwazvo! Ine mitsara yakachena. Plumber anga asina nyaya kana achiisa.
Chigadzirwa chinotaura choga. Iko kuisirwa kwaive kwakaomarara zvishoma pane zvakajairwa nekuda kweiyo yade drain. Zvakatora nguva yakareba kuti zvibudiswe asi mushure meizvozvo zvese zvakafamba sekuronga. Tarisa uone iyo mifananidzo, sezvandataura, ichi chigadzirwa chinotaura choga
Kana mukomana wangu paakatanga kutarisa zvese izvi zvikamu, akashatirwa ndokuti "pex" sekunge raive izwi rakasviba. Panguva yaakapedza kuisa faucet iyi, anga achiimba kurumbidza kweavo vakagadzira izvi, uye achibvunza kuti sei zvese zvigadzirwa zvemapaipi zvisiri izvi zvakanaka. Saka ndakafara kuti ndakasarudza iyi faucet. Kunze kwekureruka, ndinofunga yakanaka.
Iwo chete maitiro andaitsvaga uye pombi inotaridzika zvakanaka uye inoshanda mushe. Wakauya wakanyatso rongedzwa nezvakakosha zvekushandisa uye nzira. Aifanirwa kuve neyapombi yekuisa nekuti zvikamu zvepombi yemvura zvekare zvaisazobuda uye mavharuvhu ekupedzisira-ekuvhara aida kuchinjirwa, saka ndinofarawo kuti waive mutengo wakakura zvakare.
Inotyisa pombi yemari. Inouya ne3 / 8 compression fittings, ichiita kuti ive nyore kuchinjika kune akawanda ekunyura mashandiro.
Ane hunhu hwepombi zvakapetwa mutengo.
Takanga tine imba yekugezera isina maturo yakaiswa iyo isina kuuya nepombi, ndakatsvaga yakawanda ndikaitisa iyi nhema kuti iishandise imomo inowana mukana wakaringana wekushandisa, zviri nyore kwazvo kupusha / kudhonza. zviri nyore kutevera bepa rinouya nebhokisi, rakasimba, rinopenya, rinotaridzika, zvikasadaro, izvi zviri nyore kuisa pombi uye rinotaridzika chaizvo pamusoro pedu pamusoro penzvimbo yedu nyowani yemaguneti.
WOWOW Matte Akasviba maviri-Anobata Yakapararira Bathroo ...
Cube Matte Bhasiketi Yakadzika Bhinari Yekusanganisa
TAURA NESU USA Kero: 8 GURU STE A, KENT, DOVER GUTA, DE, 19901. USA TEL: 3476134901 E-mail: sale@wowowfaucet.com